Transfer Archives - Myanmar Sports Villages
ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၇၁ သန်းဖြင့် ခေါ်ယူထားသည့် စပိန်ဂိုးသမား ကီပါကို စိတ်တိုင်းမကျသည့်အတွက်ကြောင့် အစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ကီပါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီကတည်းက အမှားများစွာကျူးလွန်ခဲ့ပြီး လက်စွမ်းကျဆင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့် ပရိသတ်များရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ခံနေရပါတယ်။ ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ကို ၃ ဂိုးပြတ်အရေးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာတော့ ကီပါဟာ ဆက်လက်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး ၎င်းကို ရောင်းထုတ်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကလည်း ဂိုးသမားပြသာနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် အေဂျက်စ်အသင်းရဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် ဂိုးသမား အန်ဒရီ အိုနာနာကို ခေါ်ယူဖို့ ချိတ်ဆက်နေပါတယ်။ အိုနာနာရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်း တာဝန်ရှိသူတွေဟာ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြီလို့ The Athletic က ဖော်ပြထားပါတယ်။ အိုနာနာဟာ ၂၀၁၆ ကတည်းက အေဂျက်စ်အသင်းကြီးမှာ စတင် ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်စွမ်းပြကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အိုနာနာရဲ့...
ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း၏ ကမ်းလှမ်းမှုကို ပယ်ချခဲ့သည့် ချယ်လ်ဆီးကစားသမား #ဝီလီယမ်
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ဝါရင့် တောင်ပံကစားသမား ဝီလီယမ်ဟာ ရာသီအကုန်မှာ လန်ဒန်ကလပ် နှင့် စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ စာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ကိစ္စကို ချယ်လ်ဆီးအသင်းဘက်မှ ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း လက်ရှိအချိန်ထိ တစ်စုံတစ်ရာထူးခြားလာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ သက်တမ်းတိုးဖို့ နှောင့်နှေးနေတဲ့ ဝီလီယမ်ကို နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားကြီး ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းပိုင်ဆိုင်သည့် မေဂျာလိဂ်ကလပ် အင်တာမီယာမီမှ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ အင်တာမီယာမီဟာ ဝီလီယမ်ကို မက်မောလောက်သည့် ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုနှင့်အတူ ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း ဝီလီယမ်က ချက်ချင်းပယ်ချသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဝီလီယမ်ရဲ့ အခြေအနေကို မြို့ခံပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ် နှင့် စပါးစ်တို့က စောင့်ကြည့်လျက်ရှိပါတယ်။ ဝီလီယမ်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အပြီး ပြန်စတဲ့ ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေမှာ ပွဲထွက်ခွင့်အများဆုံးရရှိခဲ့သလို၊ အသင်းအတွက်လည်း အဖိုးတန်သည့် သွင်းဂိုးများ သွင်းယူပေးလျက်ရှိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာ (၄) ဂိုးအထိသွင်းယူခဲ့ပြီးနောက် ဝီလီယမ်ရဲ့ လက်ရှိရာသီစုစုပေါင်း သွင်းဂိုး (၁၁) ဂိုးအထိ ရှိလာခဲ့ပြီးနောက် တိုက်စစ်မှူး အေဗရာဟမ်ရဲ့ နောက်မှာ ဒုတိယမြောက်သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားအဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ...
ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူဖို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသဘောတူညီမှုရယူခဲ့သည့် ယူနိုက်တက်
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဒေါ့မွန်တောင်ပံကစားသမား ဂျေဒန်ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူဖို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သဘောတူညီမှုရယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းများပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ထွက်ပေါ်လာသည့် သတင်းများအရ ယူနိုက်တက်ဟာ ဆန်ချိုကို (၅) နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားဟာ သူ့ရဲ့ ကစားကွက်ကို ပိုမိုထက်မြက်စေဖို့အတွက် ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူဖို့ အရင်ကတည်းကပစ်မှတ်ထားနေတာပါ။ ဆန်ချိုကို အခြေခံစာ တပတ်လုပ်ခ ပေါင် ၁၄၀၀၀၀ အပြင် အပိုဆုကြေးငွေ အပါအဝင် အများဆုံးပေါင် ၂ သိန်းနီးပါး ပေးချေသွားဖွယ်ရှိပါတယ်။ ကစားသမားနဲ့ အဆင်ပြေသွားပြီတဲ့အတွက်ကြောင့် အပြောင်းအရွှေ့အထမြောက်ဖို့အတွက် ယူနိုက်တက် နဲ့ ဒေါ့မွန်တို့ဟာ ခေါင်းချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ့မွန်ဟာ ဆန်ချိုအတွက် အနည်းဆုံး ပေါင်သန်း ၁၀၀ ဝန်းကျင်မှာ အလိုရှိနေပြီး ယူနိုက်တက်ကတော့ အဆိုပါဈေးအတိုင်းပေးချေရဖို့ရှိပါတယ်။ ဆန်ချိုကိုယ်တိုင်လည်း မွေးရပ်မြေကို ပြန်လာပြီး ကစားချင်နေတာကြောင့် ယူနိုက်တက်ဘက်က ဒီအခွင့်အရေးကို အမိအရဖမ်းဆုပ်ရဖို့ရှိပါတယ်။ ဒေ့ါမွန်ကြောင့် ထွန်းတောက်လာခဲ့ရတဲ့ ဆန်ချိုဟာ...
ယခုတပတ်အတွင်းမှာပင် ဂျူဗင်တပ်စ်နှင့် ဆေးစစ်မှုခံယူတော့မည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်လာသည့် #အာသာမယ်လို
အာသာမယ်လိုရဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အပြောင်းအရွှေ့ဟာ အထမြောက်ဖို့ အတော်လေးနီးစပ်လာပြီဆိုလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဘာစီလိုနာနဲ့ ပီဂျာနစ်တို့ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကတော့ ဆက်လက်ဆွေးနွေးညှိ့နှိုင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့လကတည်းက စတင်ခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ၊ ဂျူဗင်တပ်စ်၊ အာသာမယ်လို သုံးပွင်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းဟာ နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကတ်တလန်မြေကိုရောက်တာမကြာသေးတဲ့ အာသာ တစ်ယောက်တော့ အီတလီမြေမှာ နောက်ထပ်စွန့်စားခန်းတစ်ခုကို ဖွင့်ရတော့မှာပါ။ အာသာမယ်လိုဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ အတူ ကာလကြာရှည်စွာဖြတ်သန်းဖို့ ရည်မှန်းထားသော်လည်း နောက်ဆုံးမှာတော့ သူ့ကို လိုလိုလားလားရှိတဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ အာသာကို ဘာစီလိုနာမှာရတဲ့ လစာထက် ပိုပေးပြီး တစ်နှစ်ကို ယူရို (၅) သန်း + အပိုဆုကြေငွေးပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ တူရင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ခဲ့ပါက (၅) နှစ် သက်တမ်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း ဂျူဗင်တပ်စ်ကွင်းလယ်လူ ပီဂျာနစ်ဟာ ဘာစီလိုနာကို (၅) နှစ်စာချုပ်ဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် လုပ်ခလစာ...
Categories La Liga/Serie A/Transfer
ဘရာဇီးလ်ကွင်းလယ်လူ အာသာမယ်လိုဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ကာလကြာရှည်စွာကစားဖို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားသော်လည်း ရာသီအကုန်မှာတော့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ အသင်းပြောင်းဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါပြီ။ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းက အလိုရှိနေတဲ့ အာသာကို ပေါင် ၇၂.၅ သန်းနဲ့ ရောင်းချဖို့ သဘောတူလိုက်ပါပြီ။ အာသာဟာ ယခင်ကတည်းက နှစ်သင်းစလုံးကို အသင်းမပြောင်းဖို့ ပြောထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ အပြောင်းအရွှေ့အတွက် ငွေလိုတာကြောင့် ရောင်းထုတ်လိုက်တယ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ Sky Sports ၏ အဆိုအရ ဂျူဗင်တပ်စ်နည်းပြ ဆာရီဟာ နာပိုလီနှင့် ချယ်လ်ဆီးမှာ ကိုင်တွယ်စဉ်က အီတလီကွင်းလယ်လူ ဂျော်ဂျင်ဟိုကို အသုံးပြုသကဲ့သို့ အာသာ ကိုလည်း ယခုဂျူဗင်တပ်စ်မှာ ထိုပုံစဉ်အတိုင်း အသုံးပြုသွားဖို့ ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ အာသာဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်ကို ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ခဲ့ပါက ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ရသော လစာထက် ပို၍ရလိမ့်မယ်လို့ သိရပြီး တစ်နှစ်ကို ပေါင် ၄.၅ သန်းလောက် ရရှိမည်ဟု သိရပါတယ်။...
အာသာမယ်လိုကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် စည်းရုံးရေးဆင်းရအုံးမည်ဟု ဝန်ခံခဲ့သည့် ဂျူဗင်တပ်စ်ဒါရိုက်တာ #ပါရာတီစီ
ဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့ ဘာစီလိုနာတို့ဟာ ကွင်းလယ်ကစားသမားများဖြစ်သည့် အာသာမယ်လိုနှင့် ပီဂျာနစ်တို့ကို အလှဲအလဲ ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ပီဂျာနစ်ကို အလိုရှိနေသလို၊ ဂျူဗင်တပ်စ်ကလည်း အာသာ ကိုခေါ်ယူချင်နေပါတယ်။ ကိုဗစ်ကြောင့် ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲရှိသည့်အတွက် ငွေသားဖြင့် ခေါ်ယူမည့်အစား ကစားသမားအလှဲအထပ်ပုံစံဟာ ယခုနွေရာသီအတွင်း ခေတ်စားလာဖို့ရှိပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်ဒါရိုက်တာ ပါရာတီစီက ဘာကာကွင်းလယ်လူ အာသာကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် စည်းရုံးရေးဆင်းဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ ဘိုလော့ဂ်နာ နှင့်ပွဲအပြီးမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပီဂျာနစ်ဟာ ကတ်တလန်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စိတ်အားထက်သန်သော်လည်း အာသာကတော့ တူရင်မြေကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆန္ဒမရှိပဲ ဘာစီလိုနာအသင်း၌သာ ရေရှည်ဖြတ်သန်းသွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုဟာ ကလပ်၊ ကစားသမား၊ အေးဂျင့် ၃ ဦးစလုံး သဘောတူမှသာ အထမြောက်တာကြောင့် ဂျူဗင်တပ်စ် နှင့် ဘာစီလိုနာတို့က ကလပ်ချင်းသဘောတူညီမှုရရှိထားပေမယ့် ကစားသမားက ငြင်းဆန်နေတာကြောင့် အခက်တွေ့နေပါတယ်။ အပြောင်းအရွှေ့နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပါရာတီစီက...
Categories La Liga/Transfer
အလားအလာကောင်းတဲ့ ကြယ်ပွင့်ကစားသမားတစ်ဦးကိုခေါ်ယူဖို့ အသင်းဟောင်းကို တိုက်တွန်းခဲ့သည့် ဂလင်းဂျွန်ဆင်
ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ လာမည့်ရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက် နောက်ထပ်ကြယ်ပွင့်ကစားသမားတစ်ဦးကို ခေါ်ယူအားဖြည့်သင့်သည်ဟု ကစားသမားဟောင်း ဂလင်းဂျွန်ဆင်က မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ဈေးကွက်အတွင်း တခြားအသင်းများထက် လက်ဦးမှုရယူကာ အေဂျက်စ်တောင်ပံကစားသမား ဇိုင်းယက်စ် နှင့် RB လပ်ဇစ်တိုက်စစ်မှူး တီမိုဝါနာကို ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းမှာ အသက်ကြီးကစားသမားများနှင့် အံ့မဝင်ကစားသမားများရှိနေသည့်အတွက် “one in, one out” ပေါ်လစီအရ ထပ်မံပြီး ကစားသမားအဝင်အထွက်ကိုလည်း မြင်တွေ့ရအုံးမှာပါ။ ကျွမ်းကျင်သူအများစုကတော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ လူခေါ်ယူမှုတွေထပ်မံပြုလုပ်အုံးမယ်လို့ ခန့်မှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လမ်းပတ်အနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူ နေရာနှင့် ကွင်းလယ်ကို ထပ်မံအင်အားဖြည့်တင်းလာနိုင်ပါတယ်။ နာမည်ကြီးနေတာကတော့ လက်စတာစီးတီးနောက်ခံလူ ဘန်ချေဝဲလ် နှင့် လေဗာကူဆင် ကွင်းလယ်လူ ဟာဗက်ဇ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးကစားသမားဟောင်း ဂလင်းဂျွန်ဆင်က အသင်းအနေဖြင့် လက်ရှိအနေအထားအရ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို စိန်ခေါ်ဖို့ မစွမ်းသာသေးကြောင်း မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပြီး လီဗာပူးလ်ကစားသမားဟောင်း ကော်တင်ဟိုကို...